Calanka.com – TRUMP OO U JAWAABAY KIM: – Batoonkeyga nukliyeerka ayaa ka weyn kaaga, wuuna shaqeynayaa
TRUMP OO U JAWAABAY KIM: – Batoonkeyga nukliyeerka ayaa ka weyn kaaga, wuuna shaqeynayaa
in Dibedda — By Admin —	January 3, 2018 -- 2535 Views
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trmp ayaa ka jawaabay hanjabaaddii uu habeenka sannadka cusub uu u jeediyay Mareykanka madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un kaas oo uu ugu hanjabayay gantaalaha nukliyeerka ee uu dalkiisu haysto.
Mr. Kim ayaa u sheegay Mareykanka in uu usoo dhamaaday dalkiisa barnaamijka nukliyeerka islamarkaana iminka batoonka laga gano gantaalaha nukliyeerka lagu soo xiray xafiiskiisa oo uu miiska ugu dhaggan yahay.
” Batoonka laga gano nukliyeerka, miiskeyga ayuu ku dhaggan yahay. Tani waa waaqica jira, ma ahan hanjabaad”, ayuu mr. Kim ku yiri khudbaddiisa isagoona intaasi raaciyay in guud ahaan Mareykanka uu gaarayo gantaalohooda nukliyeerka.
Waxa uu sheegay in dalkiisu yahay dal masuuliyadda hubka nukliyeerka qaadi kara islamarkaana aad u jecel nabadda, waxaana uu intaa raaciyay in dalkiisu uusan isticmaali doonin hubka wax gumaada ilaa lagu soo xadgudbo mooyee.
Trump ayaa dhankiisa qoraal uu soo dhigay bartiisa Tweeter-ka waxa uu ugu jawaabay in hubka nukliyeerka ee ay Mareykanku haysto uu ka wayn yahay kana awood badan yahay midka Kuuriyada Waqooyi.
“Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waxa uu sheegay in batoonka laga gano nukliyeerka uu miiskiisa xafiiska ku dhaggan yahay, laakiin u sheega in aan anigana xafiiskeyga ku haysto batoonkaas uuna ka weyn yahay kiisa, kana awood badan yahay uuna shaqeynayo”, ayuu qoraalka twitter-ka ku yiri madaxweyne Trump.
Ma aha markii ugu horeysay oo ay hanjabaad is waydaarsadaan madaxwayne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waxa uu sidoo kale muujiyay in uu diyaar u yihiin wadaxaajood ay la galaan Kuuriyada Konfureed.
Kuuriyada Koonfureed ayaa soo dhawaysay wadaxaajood ay la galaan xukuumadda Pyongyang.